That's so good, right?: August 2011
ဘာတွေ ဘယ်လိုအတွေးရောက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို လာပြောတယ်မသိ သူ့ကို 'ဂီတာ'တီးသင်ပေးပါလားတဲ့။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင်တီးတတ်သူမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ်တီးချင်တဲ့ သီချင်းတွေကိုတော့ နည်းနည်းပါးပါးတီးခေါက်တတ်ပါတယ်။ သူ တောင်းဆိုတဲ့ နေ့ တုန်းကတော့ သေချာအဖြေမပေးလိုက်ပါဘူး။ သူဟာ ဟုတ်လား မဟုတ်လား၊ သူတကယ်သင်ချင်တာလား မသင်ချင်ဘူးလား၊ သူ့ကိုယ် သူ ဂရုစိုက်တာလား မစိုက်ဘူးလား မသေချာပါ။
မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ ညနေပိုင်း အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းက တန်းခွဲချိန်တစ်ခုမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျော်ကျော့် ကို ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရချိန်ကတည်းက ကြိုက်နှစ်သက်မိတာ တစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီ။ ထိုင်ခုံမှာ စမတ်ကျကျထိုင်ပြီး ကျောင်းသင်ခန်းစာ တွေကို စေ့ငု လေ့လာနေတဲ့ မျက်ဝန်းနက်နက်တွေက ကျွန်တော့်အတွက် အဓိက ဆွဲဆောင်မှုတွေပါပဲ။ အညိုရောင် ဆံနွယ်ထူထူ၊ မျက်တောင်ရှည်တွေ ၀န်းရံထားတဲ့ ကြယ်နှစ်စင်း၊ ဖြူဝင်းနေတဲ့ အသားအရေ၊ ကျစ်လစ်သွယ်လှတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်ရှင် သူက တစ်နှစ်ပတ် လုံး တိတ်ဆိတ်နေပြီးကာမှ ဂစ်တာကို အသာပွေ့ပိုက်ပြီး နုညံ့တဲ့လက်ရွေ့လျားမှုတွေနှင့် တီးခတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်နံဘေးမှာ အငြိမ့်သား အကြည့်မပျက်ထိုင်နေတယ်။ မြန်မာပြည်ထွက် ပစ္စည်းအတော်များများနှင့်သာ အပြင်အဆင်ဒီဇိုင်းထုတ်ခင်းကျင်းထားတဲ့ ကျွန်တော်အ သုံးပြုနေတဲ့ အခန်းထဲမှာပါ။
'မဟုတ်ဘူး၊ ဖွင့်ထားတဲ့သီချင်းကို နားထောင်၊ မင်းခပ်ဖြေးဖြေးနဲ့ တိုင်ပင်မှန်အောင် တီးလေ' ကျွန်တော် သူ့ကိုပြောပြရတယ် လက် ကွက်မှန်အောင်ရောပေါ့။ ထိန်းမထားနိုင်ခင်မှာပဲ ကျွန်တော်ပြုံးမိရဲ့။
'ဆောရီးဗျာ၊ ညီက သင်ယူတာ အတော်နှေးတဲ့သူထဲမှာပါတယ်' သူက မပွင့်တပွင့်ရယ်ရင်း ပြန်ပြောတယ်ဗျ။
'အဲဒါက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ အစ်ကိုက လေ့ကျင့်သားပြည့်ဝနေလို့ပါ' နောက်အပြုံးတစ်ချက် ကျွန်တော့်ဆီက လွှတ်သွားပြန်ရော။ ကျွန်တော့် ဦးခေါင်းကို တခြားဘက်ကိုလွှဲပြီး အကြည့်ပြောင်းလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ခံစားချက်တွေ အရမ်းထင်ရှားနေမှာ စိုးလို့လေ သူ့ရဲ့ရှေ့မှာ။ သူနဲ့အတူထိုင်ပြီး သူ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို စောင့်ကြည့်နေရတာ စိတ်ထဲက ကြည်နူးနေမိပါတယ်။
သူ အဲဒါကို သတိပြုမိခဲ့တယ် ဒါမှမဟုတ် အမှတ်တမဲ့လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။ သူ ကျွန်တော့်ကို ခဏလေးမော့ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ ဂီတသံဖန်တီးမှုဆီပြန် အာရုံမစိုက်ခင် ဖြတ်ကနဲ ပြုံးပြသွားတာ ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းပါရဲ့။
'အစ်ကို တစ်ခုခုကို တီးပြဗျာ၊ ညီ ခဏနားဦးမယ်' သူ ဂီတာတီးနေရာကနေ ရပ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ဆီ ဂစ်တာလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ ကုလားထိုင်ကနေ ထပြီး ကက်ဆက်ကြီးထားတဲ့ဘေးက ကော်ဇော်ပေါ်မှာ တစ်ကိုယ်လုံးလှဲချလိုက်ပါတယ်။ သူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုယှက်ပြီး ခေါင်းကို ဖေးမထားရင်းပေါ့နော်။ သူ့ရင်အုပ်တွေဟာ မျက်နှာကျက်ကို ရင်ဆိုင်နေတာ။
'အာ...ဘာကိုစောင့်နေတာလဲဗျ တစ်ခုခုတီးပြပါ' ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး သူပြောတယ်။
'Ha! အစ်ကိုတီးချင်တဲ့အချိန်တိုင်း တီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းနားထောင်ချင်တာ တကယ်ဆိုရင်တော့' ကျွန်တော့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုလှိုင်းတွေ ပါတဲ့ အသံနှင့်ပြန်ပြောလိုက်မိပါတယ် သူ့ကို။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ခံစားရတဲ့ဟန်အတိုင်း ဂီတာကြိုးတွေကို စတင် တို့ခတ်လိုက်တယ်။ အခန်းတစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်နေတာ ဂီတာကြိုး တီးခတ်သံနှင့် ကျော်ကျော့် အသက်ရှူသံတွေက လွဲလို့ပေါ့နော်။
စွမ်းအင်တွေ နွေးလာပြီး ဆန္ဒတွေက တောက်လောင်လာတယ်။ ကျွန်တော် သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံကို နမ်းစုပ်ချင်တဲ့ အာသီသက ပိုပိုတိုးလာ တာ။ ဂီတာ Flat ပြားပေါ်ပြေးနေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းရွေ့လျားမှုတွေက မြန်ဆန်လာသလို တီးသံတွေက ကျယ်လောင်လာတယ်။ စိတ် အဟုန်က ထိန်းမရတော့။ ရုတ်တရက် ဂီတာတီးတာကို ရပ်လိုက်တယ်။
'ကိုယ့်ကို အခွင့်အရေး တစ်ခုပေးပါလား'
'ဘာကိုလဲ အစ်ကို?' သူ့ ဦးခေါင်းကို ကျွန်တော့်ဘက် စောင်းလှည့်ကာ အပြုံးတစ်ဝက်နှင့် မေးတယ်။ နှုတ်ခမ်းကို ခပ်ဟဟထားရင်း ကျွန်တော့်ကိုကြည့်တယ်လေ။
'မင်းအဲဒီလို လှဲမနေပါနဲ့လား၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒါ မင်းကို အစ်ကိုကနမ်းချင်စိတ်ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်နေလို့ပါ။ ပြီးတော့...'
အခန်းထဲ တကယ့်ကို တိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပြုံးနေတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံဟာ စေ့သွားရဲ့။ ကျွန်တော်ကြားနိုင်ခဲ့ပါတယ် သူ့နှုတ်ဖျားက ခပ်တိုးတိုး ရေရွတ်လိုက်တဲ့ စကားသံတစ်ခုကို 'အစ်ကိုပြောတာ အမှန်လို့ ညီ ထင်မိနေသား'
ကျွန်တော် ဂီတာကို ကြမ်းပြင်တစ်နေရာမှာ လှဲထားလိုက်ကာ သူအိပ်နေရာဆီ တွားသွားလိုက်ရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေနှင့် ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းအစုံကို ဖိကပ်တွေ့ဆုံလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံတွေ ဆူပွက်လာကာ သွေးတွေဟာ အရေပြားတလျောက်ပြေးလွှားပြီး တစ်ကိုယ်လုံးပူနွေးလာသလားပဲ။ ကျွန်တော့်လက်တွေဟာ သူ့ငပဲကို ရှာဖို့ ရွေ့နေချိန် နှုတ်ခမ်းများဟာ အငမ်းမရ တပ်မက်စွာ။ ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်နေတာ သူ့သွေးကြောတွေ တောင့်တင်းလာသလားမသိပါဘူး တဖြည်းဖြည်းဖောင်းလာတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နှုတ်ခမ်းတွေ လျှာတွေဟာ အတော်ကောင်းတဲ့ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ရနေကြပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့် ဂီတာကို ကျကျ မတီးခတ်နိုင်သေးပေမဲ့ အနမ်းကိစ္စမှာတော့ တကယ်စည်းချက်မိတယ်လို့ ပြောရပါမယ်။ ကျွန်တော်အနမ်းကို မရပ်တန့်ချင်ပေမဲ့ စိတ်မပါစွာ အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နှုတ်ခမ်းသားတွေ ဂဟေဆက်ပြီး ကြည်နူးမိန့်မူးရမှုကို ရယူချင်သေးတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် သူ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုထင်သွားမလဲ သိချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ်။
'မင်းမှန်တယ်၊ အဲဒါ လိမ်ညာမှုတစ်ခုပဲ။ အစ်ကို မင်းအနမ်းတစ်ခုထဲ လိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ညီနဲ့ အတွင်းကျကျပတ်သက်ချင်သေးတာ အဆုံးစွန်ထိပေါ့' အဲဒီစကားကို မပြောမိ ရှောင်ကျဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာက နားမထောင် ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရဲ့။ လက် တွေကလည်း မငြိမ်။ ကျွန်တော် သူ့ရှပ်အင်္ကျီတွေကို ဆွဲမချွတ်ယူလိုက်တယ်။ သူ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို မျှဉ်းစုပ်နေတုန်း သူ့ဗိုက်သား များစီ ကျွန်တော့်လက်အစုံက ပွတ်သပ်နေသေးတာပေါ့နော်။ ပေါင်ကြားက ခပ်မာမာအသားချောင်းကြီးဆီကိုလည်း အလည်အပတ်သွား သွားနေရသေးတယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာ သူ့နှုတ်ခမ်းတွင်သာမက တစ်ကိုယ်လုံးအနှံ့ တို့ထိကစားရတာဗျ။
သူ့အသက်ရှူသံတွေ မြန်ဆန်လာသလို နို့သီးခေါင်းလေးတွေက မာတင်းလာတယ်။ နှလုံးခုန်သံတွေဟာ သူ့အရိုးတွေကို ဖြတ်သန်း လာပြီး သံပေးလာသလားပဲ။ သူ့ကိုယ်ပေါ်က အင်္ကျီအားလုံးချွတ်ပစ်လိုက်တာ ကျွန်တော်တို့ အဓိကထိတွေ့မယ့် အစိတ်အပိုင်းလေး တွေကို ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ အလွှာပါးလေးတွေသာ ရှိတော့တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လျှင်မြန်ဖို့မလို ကျွန်တော်အချိန်ယူရမယ် အေးအေးသက်သာပေါ့။ ကျွန်တော့်အနမ်းတွေဟာ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာအောက်ပိုင်းကို တဖြည်းဖြည်းရွေ့ရင်း ဆီးစပ်က ဘောင်းဘီကြယ်သီးမှာ ရပ်တန့်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တဲ့ လေနွေးနွေး တွေဟာ အမွှေးနုလေးတွေကို ယိမ်းထိုးစေသလားပဲ။ ဂျင်းဘောင်းဘီ ကြယ်သီးလေးတွေကို ပွတ်သပ်နမ်းရှုံ့တဲ့အခါမှာတော့ သူ့ခန္ဓာ ကိုယ်က ဆပ်ပြာနံ့နှင့်အတူ ကိုယ်သင်းနံ့တစ်ချို့ကိုရပါတယ်။ ရေမွှေးနံ့နှင့်အတူ ကျွန်တော့်ရဲ့သွေးတွေဆူပွက်လာစေတဲ့ သူ့ကိုယ်နံ့ ဟာ အတော်ထူးဆန်းပါတယ်။
ကျွန်တော် သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီ အိပ်ကပ်တွေကနေ အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တာ သေးကျဉ်တဲ့ ခါးနှင့်အတူ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကောက် ကြောင်းတွေကို မြင်ရပါတယ်။ သူ့ပေါင်ခြံက ပစ္စည်းကြီးဟာ ထောင်ချောက်ထဲ အမိခံနေရသလိုပဲ ရုန်းကန်နေရှာတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့် လှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်း သူမျောပါလာကာ စိတ်ဓာတ်တွေ ပြင်းပြလှုပ်ရှားပြီပေါ့။
ဘောင်းဘီ ကြယ်သီးကို တကယ့်ဖြေးဖြေးလေးဖြုတ်၊ ဘောင်းဘီဇစ်ကို ကျွန်တော့်သွားနှင့်ကိုက်ကာဆွဲဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ သူ့စိတ်ထဲ ဂဏန်းတွေကို ရေတွက်ကာ စိတ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားနေသလားမသိ ပါးစပ်က တလှုပ်လှုပ်။ ကျွန်တော် သူ့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးကို ပြောင်းပြီး နမ်းလိုက်တယ် တက်မက်စွာပေါ့။ သူ့မျက်ဝန်းတွေဟာ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေဆီ အလန့်တကြားပြန်ကြည့်တယ်။ အသက်ရှူတာ မြန်ပုံက အခုပဲ သူ့ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်တော့မယ့်ပုံပါ။
ကျွန်တော့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ပိုမိုတိုးမြင့်လာပါပြီ။ ကျွန်တော့်လက်အစုံဟာ ခပ်ဟဟဖြစ်နေတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီအလွှာပါးက တစ်ဆင့် အတွင်းကိုနှိုက်လိုက်တယ်။ တင်းကြပ်ဖောင်းကားနေတဲ့ ဘောင်းဘီထဲမှာ သူ့ငပဲကြီး ကျွန်တော့်လက်ထဲရောက်လာတာကို ခံစားရတယ်။ နုညံ့တဲ့ သူ့အမွှေးနုလေးတွေကိုလည်း တို့ထိရင်းပေါ့။ ရွှေဥတွေက တင်းနေတာ ကျွန်တော့်လက်တွေရဲ့ ဖျစ်ညှစ်မှုကနေလွတ်မြောက် ချင်နေတယ်။
လျှိုထားတဲ့လက်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ သူ ၀တ်ထားတဲ့ boxer အတွင်းခံက အောက်ကိုလျော ကျနေတာ ဆီးစပ်က အမွှေးနုလေးတွေပေါ်လို့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်အဲဒီဘောင်းဘီကိုပါ ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ သူ့မျှားတံကြီးဟာ အပေါ် မတ်မတ်ထောင်နေတာများ သူ့ပါးစပ်ကို ပြန်ချိန်ရွယ်ထားသလိုပဲ။ သူ့ရွှေဥတွေက ၇ လက်မနည်းပါးရှိမယ့် သူ့ငပဲရဲ့ဘေးတစ်ဖက် တစ်ချက်မှာ တွဲနေတာ သူ့ရဲ့ခြေနှစ်ချောင်းကြားမှာလေ။
ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းကို ကိုယ်ကိုက်မိပါရဲ့။ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်လက်နှင့် အရင်ဆွဲကိုင်လိုက်တယ်။ အတံတလျောက် ချွေးစက်၊ ပြီးတော့ ထူးခြားတဲ့အနံ့တစ်ချို့နှင့် စိုစွတ်နေပါတယ်။ အခု ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်မိနေသလားမသိ တခြားသော အတွေးအကြံတွေ ကျွန်တော့်ဆီမှာ မရှိပေမဲ့ သူ့ပစ္စည်းကို ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲ အံဝင်ခွင်ကျ ထည့်သွင်းချင်မိတာပါ။ သူ့ငပဲကို ခပ်သွက သွက်လက်ကစားပေးနေတုန်း ရွှေဥတွေကို စပြီး ငုံစုပ်လိုက်ပါတယ်။ တစ်လုံးခြင်း လျာဖြင့်လျက်ပြီးနောက် ပါးစပ်ထဲ ငုံစုပ်ကစားလိုက် တာပေါ့နော်။ ဒီအထဲမှာ သုတ်ရည်တွေ ဘယ်လောက်များ ဆူပွက်နေပြီလဲ တွေးမိပါတယ်။ အရသာ ခံစားရသလားတွေးထင်ရသေး။
'အာ.....အ...ရှီး ဘယ်လိုလုပ်ပေးနေတာလဲ' သူ့နှုတ်ဖျားက ခပ်တိုးတိုးနှင့် တိမ်းမူးဖွယ်အမေးစကားထွက်လာသလို အသက်ရှူသံက လည်း တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်ကရောပဲ။ သူ့အာရုံကြောတွေရဲ့ အဓိကခလုပ်ကိုဆွဲနှိပ်လိုက်တာဆိုတော့ ခြားနားတဲ့ အဖြေသုံးခုက အာရုံ ကြောတလျောက် ကောင်းလိုက်တာ၊ သိပ်မိုက်တယ်၊ အံသြဖို့အကောင်းဆုံးဆိုပြီး ပြေးလွှားကုန်တာများ သူ့ခြေချောင်းလေးတွေ ကွေးကောက်ကုန်တယ်။
ကျွန်တော် သူ့ငပဲရဲ့ အရင်းကနေ ထိပ်ပိုင်းထိလျှာကိုအပြားလိုက်ထားပြီး လျက်တယ်၊ ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝက အရည်ကြည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်နေတာကို လျှာနဲ့ကလိ၊ လျှာလေးနှင့် တို့တို့လျက်ပြီးသကာလ ချိုမြိန်ဖွယ် အရသာလေးကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာမှ ကျွန်တော့်လျှာဖြင့် ပိုမိုဖြည့်စွမ်းလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်သိတာက သူ့ဆီက ခံစားချက်ကို ဒီထက်ပိုမိုပြင်းပြလာတာကို မြင်ရအောင် လုပ်ဖို့ပါပဲ။ ကျော်ကျော် နှုတ်ခမ်းအစုံကတော့ တမေ့တမောဟနေရော။ ကျွန်တော် တစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်ပြီး ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်ဆက်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ရှည်လျားလှတဲ့ ငပဲကို ကွမ်းသီးခေါင်းကနေ အဆုံးထိ တဖြည်းဖြည်းမျိုချလိုက်၊ အဆုံးသတ်ကနေ ထိပ်ဖျားဆီ ပြန်ထုတ်လိုက်....အိုး....ပူနွေးပြီး သွေးကြောတွေထောင်နေတဲ့ ငပဲကြီးပဲဗျာ။
ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲက တမျိုးတမည်ခံစားရသလိုပဲဗျ။ တရွရွနဲ့ တစ်ခုခုထိုးသွင်းတာကို ငံ့လင့်နေတာလားမသိဘူး။ အိုးမိုင့်....စိတ်ထဲ အရမ်းကို မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာပြီ။ ကျော်ကျော်သည်လည်း မထိန်းနိုင်စွာ ထထိုင်လိုက်ပါတယ် လှဲလျောင်းနေရာကနေပေါ့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေကနေ အသာဆွဲပင့်၊ နားရွက်အနားကို သူ့ပါးစပ်ကိုကပ်ရင်း ပြောတာက 'ကျုပ်အလှည့်ဘော်ဒါ' တဲ့။
သူ ကျွန်တော့်ကို အိပ်ယာပေါ်လှဲလျောင်းစေဖို့ တွန်းထည့်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို ပွတ်သပ်ပါတော့တယ်။ တကယ့်ကိုရွရွ လေးလုပ်တာများ ကျွန်တော်တစ်ခါမှမခံစားရစဖူးတဲ့ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထခြင်းကို ခံစားရပါရဲ့။ သတိမထားလိုက်စဉ်မှာပဲ ကျွန်တော့် ဂျင်းဘောင်းဘီကို လျောချွတ်လိုက်ဖို့ အခွင့်အရေးရသွားတယ်။ ကျွန်တော့်အင်္ကျီတွေဟာ အားထုတ်မှုကင်းမဲ့စွာ ကိုယ်ခန္ဓာကလျောချွတ် သွားရသလို ကျွန်တော့်အသက်ရှူနေခြင်းဟာလည်း သူ့ရဲ့ ချီးမွမ်းနေခြင်းဖြင့် လွင့်မျောလာရပါပြီ။ နှစ်ဦးသားဟာ တကယ့်ကို ပြိုင်တူလို လို Lead ဂစ်တာသံခပ်ပြင်းပြင်း တီးခတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကျောပြင်ဟာ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုလှိုင်းများဖြင့် ကွေးညွှတ်တုန်ခါလာရကာ နှုတ် ဖျားက ညည်းညူသံလေးတွေ ထွက်သွားမိပါရော။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စွာ ကြေငြာချက်တွေပေါ့နော်။ 'ငါ့တစ်ကိုယ်လုံးဟာ မင်းအတွက်ပဲကွာ'
ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းက ပေါ်ထွက်လာတယ် အပြုံးသစ်ပေါ့။ ထောင့်စွန်းလေးတွေကွေးညွှတ်သွားရင်း ပါးချိုင့်တွေပါလာတဲ့ သူကြိုက်သော အပြုံး။ သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ကျောပြင်ကို သိုင်းဖက်လိုက်ရင်း သူ့ဘက်ကို ဆွဲကပ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့လက်မောင်းတွေက သွေးကြောတွေရဲ့ လှုပ်ရှားနေမှုကို ကျွန်တော်ခံစားရသလို စိတ်ရဲ့နွေးထွေးလုံခြုံမှုကိုလည်း ရရှိမိပါပြီ အခိုက်အတန့်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာ ပူးကပ်ပွတ်သပ်နေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလျင်မလိုကြပါဘူး။ တကယ့် ရုပ်ရှင်အနှေးပြကွက်အတိုင်းပေါ့။ သူ့နှုတ်ခမ်း တွေဟာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ပူနွေးနေစေသလိုပဲ။ ကျွန်တော့်ဗိုက်သားတွေကို သူအနမ်းဆက်နေစဉ်မှာတော့ ကျွန်တော် သူ့လက်ချောင်းတွေကို တစ်ချောင်းခြင်း ငုံစုပ်မိတာပေါ့။ ခဏနေတော့ သူ့လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့်ခါးနေရာမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲ တရွရွခံစားမှုကို ရရှိတော့မှ သူ့လက်ချောင်းတွေ ဘယ်ကိုဦးတည်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် အာရုံပြု မိတာပေါ့။
အိုး...ကျွန်တော့် ခရေ၀က ကြပ်နေတာဆိုပေမဲ့ သူ့လက်ချောင်းတွေကို ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲသွင်းပြီး စုပ်ပြုထားတော့ ထင်သ လောက် မခက်ခဲပါဘူး အသွင်းအထုတ်...အ။ သူ...သူ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ ဘာရှာနေတာလဲမသိ လက်ချောင်းတွေနှင့်မွှေပြီး ရှာ နေတယ်။ တင်းထားတဲ့ စိတ်ကို လျော့လိုက်မှ သူပေးတဲ့အရသာကို ကြောထဲစိမ့်မိတော့တာ။ ကျော်ကျော် သူ့လက်ချောင်းကို စက်ဝိုင်းတစ်ခုလိုမွှေနေတာဗျ။
ကျွန်တော် ဘယ်ပါတနာနဲ့မှ အခုလို ကြက်သီးမွှေးညှင်းမထစဖူး။ ကျော်ကျော်သူ့လက်ချောင်းကို ထုတ်လိုက်ရင်း မာတောင်ရှည်လျားတဲ့ သူ့ငပဲကို အစားထိုးတဆုံးသွင်းလိုက်တယ်။ အားလုံး တဆုံးသွင်းလိုက်တာ...အာ..။ ကျွန်တော် အားကိုးစရာအဖြစ် ကျော်ကျော် ကျော ပြင်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ပွေ့ဖက်လိုက်တယ်လေ။ သူ့ဟာ...သူ့ငပဲကြီး ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်နေတာအမှန်ပဲ။ ဘယ်လို အရသာမှန်းမသိပါဘူး အီလည်လည်ကြီးလားမသိ။ လှုပ်ရှားမှုမပြု သူငြိမ်သက်နေသေးတာ ကျွန်တော်က လုပ်ပါတော့ မပြောခင်အထိ။ ကျွန်တော် သူ့မျက်နှာကို ဆွဲယူ နှုတ်ခမ်းအစုံကို နမ်းရှိုက်လိုက်ကာ သူ့နားရွက်နားတိုးကပ်ကာ ခပ်တိုးတိုးပြောလိုက်တယ်။ 'FUCK ME'
'အ...အ' ကျွန်တော့် ခရေ၀ထဲ ကြပ်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို ဒီတစ်ခါတော့ အထုတ်အသွင်း ငြိမ့်ငြောင်းစွာ လုပ်ပါတယ်။ နည်းနည်း နာကျင်တဲ့ ခံစားမှုကို ရလိုက်ပေမဲ့ သူ့အပေါ်တပ်မက်မှုအရရော၊ သူ့အနမ်းရဲ့ ဖြည့်စွက်မှုကရော မေ့ပျောက်သွားစေပါရဲ့။
ရုတ်တရက် သာယာမှုတစ်ခုတိုးလာပါတယ်။ အစာအိမ်ထဲ အစာမရှိတဲ့အခါ ခံစားရတတ်တဲ့ တလှပ်လှပ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ ကျော်ကျော် ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့လက်နှင့်ဆွဲကိုင်ကာ ကစားပေးလိုက်ခြင်းလေ။
ကျွန်တော့်ရွှေဥ၀န်းကျင်မှာ အသက်ရှူငွေ့တစ်ရှိုက်က သန့်သန့်လေး အရသာ ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါလေးက ပူသလား အေးခဲ့ သလား မသိလိုက်ရပါဘူး။ ကျွန်တော့်ခရေတွင်းထဲက တသိမ့်သိမ့်သာယာနေမှုရယ်၊ ရှေ့ပေါင်ခွဆုံက ကျေနပ်မှုရယ်က ရောသမမွှေနေ သလိုဖြစ်တာကြောင့် ထင်ပါရဲ့။ ကျော်ကျော့်မျက်ဝန်းတွေက မှေးမှိတ်ကာ သူ့ဆောင့်သွင်းချက်တွေက မြန်လာပါပြီ။ အသက်ရှူနှုန်းတွေ ကလည်း အရှိန်မြင့်လာသလို သူရော ကျွန်တော့်မျက်နှာရော နီရဲလာကြတာပါ။
ဒီနေရာမှာ နှစ်ယောက်သားရဲ့ ခံစားမှုတွေ မတူညီမှုတွေ အားလုံး သံစဉ်တစ်ခုထဲ စီးမျောသာယာနေကြခြင်း။ သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းဟာ ပိုမိုထွားလာပြီး သူ့သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်ဖို့ အသင့်ဖြစ် လာပြီဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်။ တစ်ချက်ခြင်း ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်သွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူ့ 'မအား' တွေကို ပန်းထည့်ပါရော။ သူ့အနမ်းတစ်ခု သူ့ငပဲနှင့် အသက်ရှူဖို့လေတွေအတွက် ကျွန်တော် လဲလျောင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ အပျော်ရွှင်ရဆုံး သံစဉ်ဖန်တီးမှုကို ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်မှ မပြည့်စုံခဲ့ဘူးဆိုတာ ပြန်လည်ပီတိဖြစ်ရင်း နာကျင်ခံစား၊ အသက်ရှူမဲ့၊ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်စွာ လဲလျောင်း နေတာလေ။
ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှူသံတွေ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်သွားချိန်မှာတော့ သူ ကျွန်တော့်ကို နွေးနွေးထွေးထွေးဖက်ရင်း နုညံ့စွာအနမ်း တစ်ခုပေးပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့ဆီက ပေါ်ထွက်လာတဲ့ အမေးစကားကြောင့် ကျွန်တော် ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောမိသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါပဲ။
'ဒါဆို နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုက ဘယ်အချိန်သင်ပေးမှာလဲဗျ?'
Alex Aung (31-8-11)
Posted by Alex Aung at 3:48 PM No comments:
လိင်တူတွေကို လက်မခံဘူးဆိုတာကို ဖြစ်တတ်ပါတယ် ဒါကလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးဗျ
တကယ့် Real World မှာလည်း မိသားစုဝင်ချင်းတောင် စိတ်ဓာတ်
ခံယူချက်တွေမတူတာမို့ ဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံတာကိုလည်း အပြစ်ရယ်လို့တော့
ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းတာက ရွံတယ်လို့ဆိုထားတာလေးတွေပါ အဲဒီလိုပြောတဲ့သူတွေက Gay
တွေထဲမှာမှ တော်တော်အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့သူတွေကို မြင်ထားမိတယ်နဲ့တူပါတယ်
ဒီလိုလိင်တူလောကမှာ အားလုံးက အဆင့်အတန်းမမဲ့သလို အားလုံးသည်လည်း
ဒါပေမယ့် လူအများမြင်သာနေတာက (ဥပမာ - မြင်မကောင်းလောက်အောင်
ဖြတ်သွားသမျှလူကို စည်းရုံးဆွဲဆောင်နေတာတွေ၊ နောက်တစ်ခုက Sex အတွက်
ကိုယ့်မာန ကိုယ့်သိက္ခာကိုတောင် မထိန်းနိုင်ပဲ
နောက်ပြီး Bisexual သမားတွေလည်း၇ှိနေတတ်လို့
ဒါမှမဟုတ် တစ်ချို့သောသူတွေက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို For Show
ဒီလိုနှမချင်းမစာနာရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အားမပေးပါဘူး
လိင်တူချစ်သူတော်တော်များများထဲမှာ ဆေး၊ နည်းပညာ၊ IT၊ Business နဲ့
ပြီးတော့ မိန်းကလေးလို့ မိမိကိုယ်ကို ခံယူထားတဲ့သူနဲ့
လူပီသဖို့နဲ့ စာရိတ္တကောင်းဖို့ အရည်အချင်းထက်မြက်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်မဟုတ်လား
သုံးစားမရပဲပေတေနေတဲ့ Straight တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာတော်နေတဲ့
လိင်တူတွေမှာလည်း အဆင့်အတန်းတွေရှိပါတယ် ဒါပေမယ့်အဆင့်အတန်းမြင့်သူတွေက
ဘဝကိုအေးအေးလူလူဖြတ်သန်းနေတာကြောင့် လူတွေမြင်တာနည်းပြီး အခုလို
ဒီလိုလူတွေအတွက် လိင်တူချစ်တယ်ဆိုတာ အထူးအဆန်းလည်းမဟုတ်သလို
ဒါကြောင့် Sex ဆိုတာကြီးကိုလည်း Real World
နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာက တစ်ချို့သော Straight ဆိုတဲ့သူတွေက
လိင်တူချစ်သူတွေအကြောင်းရေးသားတဲ့ ရသစာပေ Blog တွေမှာ
ဆဲထားဆိုထားတာတွေကို မကြားဝံ့မနာသာတွေ့နေရပါတယ် ဒါပေမယ့် အောက်က
လိင်တူချစ်သူတွေက ပုံမှန်ပဲတုံ့ပြန်ထားပါတယ် အဲဒါ XMX ဆိုတဲ့ Social Site
ဒီတော့ သဘောမကျရင်တောင် မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ မဆဲသင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်
ရှေးမြန်မာအဆိုအရ .. အမိယုတ်က နှုတ်ကြမ်း၏ အဖယုတ်ကကိုယ်ကြမ်း၏ ဆိုသလိုပဲ
ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကို ကိုယ်လှစ်ဟပြနေတယ်ဆိုတာကို သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီလိုဆဲဆိုနေတဲ့သူက Straight ပါလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာ တော်တော်လေးကို
တစ်ချို့က ယောင်္ကျားလေးဆိုတော့ဆဲမှာပဲဆိုတဲ့ comment
ကိုလည်းရေးထားပါတယ်.... ယောင်္ကျားလေးဆဲတာ Fashion တစ်ခုမဟုတ်သလို
ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မကိုက်ညီပါလို့အထူးတလည်မပြောကြပဲ ဒီလို လိင်စိတ်ခံယူချက်ကို
တကယ်တော့ သေးသေးလေးနဲ့ ကြီးကြီးပဲကွာတာပါ ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းကိုက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်တွေလောကကြီးမှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို
ခုနကလို ပါးစပ်က အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ဆောက်ခြောက်ဆိုတဲ့ စကားလို
ဒါမှလည်း ဖတ်မိရှုမိတဲ့ အများပြည်သူမျက်စိမှာ ပသာဒဖြစ်မှာပါ
ဒါကျွန်တော်က သည်ဝါကျကိုပဲ ဥပမာပေးတာပါ နောက်ထပ် နှမသားချင်းမှ
ဒီစာကို ဖတ်နေကြတဲ့ထဲမှာ ခုနကလိုမျိုး လိင်တူချစ်သူတွေကို
ဆဲချင်ဆိုချင်နေတဲ့သူတွေများရှိတယ်ဆိုရင် မဆဲပါနဲ့လိုပဲ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ
နောက်တစ်ခုက လိင်တူချစ်သူတွေကို တောင်းဆိုအကြံပြုပါရစေ
တော်တဲ့သူတွေ တတ်တဲ့သူတွေ ထက်မြက်ကြတဲ့သူတွေပါ
တန်းတူဖြစ်နေအောင် သာနေအောင် ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်
Straight တစ်ယောက်ရဲ့ခံယူချက်ကို လေးစားနားလည်သလို Homosexual
တစ်ယောက်ရဲ.ဘဝကိုလည်း လက်ခံနားလည်ပေးနိုင်တဲ့ ကျွန်တော်ဟာလူသားစစ်စစ်ပါ
သင်သည်အများအမြင်အရ ယောင်္ကျားစစ်ချင်မှစစ်မည်၊ မိန်းမစစ်ချင်မှစစ်မည်၊
နွေးထွေးသော၊ ကြင်နာတတ်သော၊ စိတ်ထားမွန်မြတ်သော ...........
နားလည်ရန်ခက်ခဲနေသေးသူများ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း နားလည်ပေးနိုင်ပါစေ
by မီး နတ် on Wednesday, August 24, 2011 at 4:26am at www.facebook.com
Posted by Alex Aung at 11:10 AM3comments:
Posted by Alex Aung at 12:11 PM 1 comment:
လိင်တူချစ် အမျိုးသားစုံတွဲများအတွက် ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေစေမယ့်နည်းလမ်း (၈) သွယ်
Gay ဆိုရင် အမြင်တစ်မျိုးနှင့် ကြည့်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံချင်ကြတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကြားမှာ ရုန်းကန်ခဲ့ရမှုတွေ၊ သည်းခံခဲ့ရမှုတွေ ပြီးတော့ စိတ်ခေါ်မှုတွေနှင့် ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးနောက် လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတစ်ယောက်အနေဖြင့် အချစ်စစ်ဆိုတာကို ကိုယ်လိုအမျိုးသား တစ်ယောက်ဆီမှာ ရှာဖွေမိတတ်ကြပါတယ်။ ဟုတ်တယ်! အချစ်စစ်ဆိုတာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီ။ ကိုယ့်ရဲ့ Mr. Right ကိုသင်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီ ဆိုပါတော့ အခုဘာလုပ်ကြမလဲ?
လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူ ကြိုက်နှစ်သက်သူ အမျိုးသားများဟာ ပညာပေး သို့မဟုတ် တစ်ခြားအမျိုးသားကို ဘယ်လို ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံရမယ် စတဲ့ နည်းပေးလမ်းညွှန်တွေကို သိပ်လက်မခံချင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ကျန်းမာစွာ၊လန်းဆန်းပြီး တစ်ယောက်ကို တစ် ယောက်အကျိုးပြုစေမယ့် ပေါင်းသင်းဆက်နွယ်မှုတွေရရှိဖို့ဆိုတာ လေ့လာစရာ သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြု စာအုပ်စာတမ်း တွေရှိ မှမရှိခဲ့တာကိုသတိပြုမိကြမယ်နော်။
ကိုယ့်ဘ၀နေထိုင်မှုပုံဟန်၊ စိတ်ထား၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပုံစံနှင့် အမြင်သဘောထားတွေတိုက်ဆိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးသော သူကို များသောအားဖြင့် ရှာဖွေခဲ့တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်မှု၊ကတိသစ္စာ၊ပွင့်လင်း သောဆက်ဆံရေးတွေက နှစ်ဦးကြားဆက်နွယ်မှုကိုပိုမိုခိုင်မြဲစေတာတော့ မမေ့သင့်ပါဘူး။ အတွေ့အကြုံများစွာကနေ လေ့လာခဲ့ရတဲ့ သင်ခန်းစာသစ်လို့ဆိုနိုင် ပါတယ်။
လိင်တူချစ်အမျိုးသားများရဲ့ နှစ်ဦးသား စပ်တူလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မှုတွေမှာ အောင်မြင်ကြီးထွားမှုနှင့် ရင်းနှီးမှု မြှင့်တင်ဖို့ အာရုံစိုက် ရမှာက သတိရှိရှိ လုံ့လကောင်းစွာဖြင့်ရပ်တည်နေထိုင်ကြခြင်းပေါ့နော်။ ကျွန်တော်ပြောပြမယ့် နည်းလမ်းတိုလေးတွေက တိုတောင်းပေမဲ့ လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားစုံတွဲများအတွက် သူတို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာလျှင်မြန်ပြီးထိရောက်မယ့် လမ်းညွှန်လေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာ အသေအချာပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီကျည်ဆန်လေးတွေကို စိတ်ထဲမှာအမြဲထားပြီး သတိထားလုပ်ဆောင်ရင်ဖြင့် နှစ်ဦးသားအတွက် ခိုင်မာတဲ့ ရွှေမျက်နှာပြင်ပေါ် အတူရပ်တည်နေနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါရစေ။
အောင်မြင်သော ဆက်ဆံရေး နည်းလမ်းလေးများ
(၁) ကိုယ်စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုအဆုံးစွန်တွေကို ကိုယ့်ပါတနာအပေါ် ထားရှိခြင်းအားရှောင်ကြဉ်ရပါ့မယ်။ တစ်ယောက်ခြင်းဆီမှာ ကိုယ်ပိုင် ဘ၀၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများစွာကိုဖြတ်သန်းပြီးရှင်သန်လာရတာဆိုတော့ တစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို တစ်ယောက်က အဆင်ပြေ ဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေထိုင်ခြင်းက ဘ၀သစ်တစ်ခုအတွက် အကောင်းဆုံး တိုးတက်လာမယ့် အားအင်ပါပဲ။
(၂) ကာလကြာရှည်စွာ အတူနေခဲ့ကြတယ်ထားဦး သင့်ပါတနာဟာ သင့်လိုအပ်ချက် ခံစားချက်တွေအားလုံးသိမြင်နေလိမ့်မယ်လို့ မမျှော် လင့်ထားသင့်ပါဘူး။ စိတ်ဆန္ဒကို စိတ်ကူးသက်သက်ဖြင့် တွေးဆကြည့်ခြင်းနှင့် ယူဆချက်များပြုလုပ်နေပါက ဖြစ်တည်မယ့် အလားအ လာများကတော့ သဘောထားကွဲလွဲခြင်းများနှင့် နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများဆီ ဦးတည်နေပါလိမ့်မယ်။ ငါသိငါတတ်လုပ်နေတာထက် သင် လိုချင်တာ လိုအပ်တာရုယ် ခံစားသိမြင်နေတဲ့အရာတွေကို တစ်ဘက်သားအား ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တိုက်ရိုက်မေးမြန်းပြောဆိုလိုက်ဖို့ပါပဲ။
(၃) သင်နဲ့သင့်ပါတနာရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအပေါ် ပြန်လည်စစ်ဆေးမှု လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ သင်တို့ဆက်ဆံရေးဟာ ဘယ်ကိုသွား နေတယ်၊ သင်နဲ့သင့်ပါတနာတို့ ဘယ်လောက် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေအပေါ် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရာရောက်ပါတယ်။ နှစ်ဦး သားကြား ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထားကြခြင်းကလည်း နှစ်ဦးသားကြားဆက်ဆံရေးအပေါ် သွေးသစ်လောင်း ရာ၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဖုံးကွယ်မှုမရှိတဲ့ နယ်ပယ်များဆီ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားကင်းစွာ အတူလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြဖို့ဖြစ်တည်စေမှာပါ။
(၄) နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရဲ့ ထူးခြားသောလက္ခဏာ ဆက်သွယ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဟာ ပျားရည်ဆမ်းကာလမှာ အမြန်ဆုံးမြင့်တက်တတ် လေ့ရှိပါတယ်။ စုံတွဲတွေအတွက် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုရဲ့ အစပျိုးအတွေ့အကြုံလေးတွေဟာ နှစ်ဦးသား စတင်ချိန်းဆိုတွေ့ ဆုံတဲ့နေ့ကာလတွေကတည်းကဖြစ်တည်ပါတယ်။ ဒါပုံမှန်ပါပဲ။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် တွယ်တာလွန်းမှုကြောင့် အမှားလို့မဆိုသာတဲ့ စိုးရိမ်ရမှုလေးတွေ တွေ့ကြုံခံစားရတတ်ပါတယ်။
အဲဒီလို ခံစားရမှုလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်ချိန်မှာ သင်တို့နှစ်ဦးသားရဲ့ ဆက်နွှယ်မှုနှင့် လိင်မှုဘ၀ထဲသို့ ပို၍ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနှင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်မှု လေးတွေပိုမိုဖြည့်စွက်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဖြင့် ရှေ့ဆက်ဖို့အားအင်ဖြစ်စေမှာပါ။ သင့် ပါတနာကို အံ့အားတသင့်ခံစားမှုလေးတွေ ရရှိကြည်နူး စေလိုက်ပါ။ ပင်ကိုယ်စေ့ဆော်မှုရဲ့ ထင်ဟပ်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုအဖြစ် ပျော်ရွှင်ပါစေ။ သူဟာ သင့်အတွက် ဘယ်လောက် အထူးအရေးပါသူ အရေးကြီးသူဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူသိမြင်ခံစားပါစေ။
(၅) နှစ်ဦးသားဆက်ဆံပတ်သက်မှုမှာ ဘယ် role က ပိုပြီးသင့်ကိုကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေတယ် နေထိုင်ဖို့အဆင်ပြေတယ် ဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများရဲ့ တကယ့်အားသာမှုတစ်ခုကတော့ သာမန်ယောက်ျားမိန်းမစုံတွဲများလို တစ်ဖက် သတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ လက်ခံရသူများမဟုတ်ဘဲ သက်သောင့်သက်သာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေထိုင်နိုင်တာပါပဲ။ ကိုယ့်ပါတနာ နှင့် ကြိုက်တာ မကြိုက်တာ ဦးဆောင်တာ မှီခိုတာ ဘယ်လို role က အဆင်ပြေကြတယ်ဆိုတာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးနေထိုင်ခြင်းက နှစ်ဦး သားဆက်ဆံရေးမှု ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဒီ decision-making ကဏ္ဍမှာ နှစ်ဦးသားရဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်နှင့် ဗီဇသဘာဝကလည်း အရေး ပါပါတယ်။ ထားပါလေ...ဘ၀နေထိုင်မှု role သာမကဘဲ အိပ်ယာထဲက လိင်မှုကိစ္စ role ကလည်း ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေမယ့် အနေအထားကိုဦးစားပေးဖို့သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်က ဘာပဲ သူကဘာပဲဆိုပြီး တစ်ဖက်သတ်မဟုတ်ဘဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန် အလှန်ကျေနပ်စေနိုင်မှုကအရေးပါပါတယ်နော်။ နဂိုကတည်းက ဒါပဲ ဒါကိုကျေနပ်တယ် အဆင်ပြေတယ်ဆိုသူ စုံတွဲများအတွက်ကတော့ ပြောဖို့မလိုဘူးပေါ့လေ။
(၆) အရုပ်ဆိုးတဲ့ ကွဲလွဲမှုသဘောထားများ အထင်အမြင်လွဲမှုများဖြင့် စစ်ပွဲများဆင်နွှဲကြခြင်းက နောက်ဆုံး နောင်တဆိုတဲ့အရာဆီ ခေါ် ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ဒေါသ၊စိတ်စောမှု၊ယုံမှားသံသယတွေကို သဘောပေါက်နားလည်အောင် အရင်မကြိုးစားဘဲ တစ်ဖက် သားပေါ် ပေါက်ကွဲပြခြင်းက မပြုစကောင်းတဲ့အရာပါ။ တကယ်လို့ပေါက်ကွဲမိသွားရင်လည်း ငြိမ်းချမ်းစွာပြန်လည်အဆင်ချောမည့် အကြောင်းတရားတွေကို ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
(၇) (ခုနှစ်ခုမြောက် အကြံပေးနည်းလမ်းကတော့ ကျွန်တော်တို့လို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနှင့်တော့ သိပ်မသက်ဆိုင်သေးဘူးထင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးသဘောတူ နေထိုင်ကြတယ်ထားဦး တရားဥပဒေအကြောင်းအရာအရ တရားဝင်ကိစ္စအဖြစ်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သေး ပါဘူး။) နှစ်ဦးသားရှေ့ရေးအာမခံချက်ရှိအောင် စီမံကိန်းချလုပ်ဆောင်ပါ။ နှစ်ဦးသားရဲ့ ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုကို တရားဝင်ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။ မိမိပိုင်ပစ္စည်းများ၊ ဖြစ်တည်မှုများ၊အကျိုးခံစားမှုများကို တရားဝင်အခိုင်အမာသတ်မှတ်လို့ရအောင် ရှေ့နေရှေ့ရပ်ဖြင့် ဥပဒေ ကြောင်းအရ အကူအညီရယူလုပ်ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ သာဓကအားဖြင့် နှစ်ဦးသားရှေ့ရေးအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ၊ ရှေ့ရေး အာမခံချက်ပြည့်စေမယ့်အစီအစဉ်တွေကို ကြိုတင်စဉ်းစား ဆောင်ရွက်ထားဖို့ဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြင့် ပေါင်းစည်းညီညွတ်တဲ့ နိုင်ငံသစ်အတွက် အရေးပါမှာပါလို့။
(၈) စီးပွားရေးကိစ္စတွေကြောင့် နှစ်ဦးသားကြား ရှုပ်ထွေးလာမယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်း ခွင့်မပြုသင့်ပါ။ အလုပ်အကိုင်စီးပွားရေး၊ တစ်ကိုယ်တည်းနေချိန်၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ၊မိသားစုကိစ္စ နှင့် ကိုယ်တွေစုံတွဲအတွက် ဟန်ချက်ညီအောင် နည်းလမ်းကိုရှာဖွေလုပ် ဆောင်ထားရပါမယ်။ ဟိုးအရင် အစဦးကာလ နှစ်ဦးသားချိန်းဆိုတွေ့ဆုံတဲ့ညလေးတွေတုန်းကလို အတူတူတွေ့ဆုံ တွေ့ကြုံနေရ တဲ့ပြဿနာအဖုံဖုံ၊ အခက်အခဲ၊ ပြီးတော့ ရရှိမိတဲ့ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုလေးတွေကို ပြောဆိုဆွေးနွေးကြရင်း တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးအဖြစ် သီးသန့်ညတစ်ညကို အချိန်တစ်ခုကို ပုံမှန်ရယူဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
အကြံဥာဏ်ပေးချက်ဆိုတာက သိပြီးသားလူတွေအတွက်ကတော့ ဘာမှအရေးမပါပေမဲ့ မသိသေးသူ စုံတွဲအသစ်လေး များအတွက် ကတော့ ကျွန်တော်ပြောဆိုချက်လေးတွေ အကြံဥာဏ်လေးတွေက သဲတစ်ပွင့် ဆားတစ်ဆုပ်လို အရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ 'ဘ၀' အထူး သဖြင့် လိင်တူချစ်ကြိုက်သူ အမျိုးသားစုံတွဲများအတွက် 'ဘ၀'ဆိုတာက တာဝေးလက်ဆင့်ကမ်းအပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုနှင့်တူပါတယ်။ လမ်း တစ်ဝက်မှာ ရပ်လိုက်မှာလား တက်ညီလက်ညီ ပန်းတိုင်ဆီအရောက်ပြေးကြမှာလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်..တာဝေးတစ်ခုကို လက်ဆင့်ကမ်း ပြေးနေတဲ့ အပြေးသမားအဖွဲ့တစ်ခုအသွင် မှတ်ယူပြီး တက်ညီလက်ညီဖြင့် ဘ၀ပန်းတိုင်ကိုအတူဖြတ်ကျော်သွားကြ ဖို့ဖြစ်ကြပါစေ ကြောင်း လိင်တူနှစ်သက်သူအမျိုးသားစုံတွဲများအတွက် အကြံလေးတွေပေးလိုက်ရပါတယ်။
Alex Aung (12 Aug 2011)
အိပ်တာနောက်ကျတဲ့ သောကြာနေ့ညတစ်ညပါပဲ။ အိပ်ယာပေါ်ကို တွားတက်လိုက်ပြီး ခေါင်းအုံးတွေပေါ် ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုအသာ မှေး တင်လိုက်ပါတယ်။ မျက်မှန်ကိုအသာချွတ်ပြီး ခုတင်ဘေးက စားပွဲပုလေးပေါ်အသာထားလိုက်ကာ အမှောင်ကဲတဲ့ ပြတင်းပေါက်က ညမြင် ကွင်းကို ငေးရင်း အတန်ကြာ ငြိမ်သက်နေလိုက်တော့ တစ်ကိုယ်လုံးကြွက်သားတွေက ပြေလျော့စပြုလာပါရော။ တနေကုန် ကျောင်း ကိစ္စနှင့် ဟိုသည်သွားနေခဲ့ရတာကြောင့်ရယ်၊ ညရောက်တော့ ကျောင်းစာတွေ လုပ်နေတာကြောင့်ရယ် လူလည်း နွမ်းလျ လက်ကုန်ကျ နေပါပြီ။ ညဟာ တဖြည်းဖြည်း တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လာသပေါ့နော်။ 'Buzz....Buzz' ဒီအချိန်ကြီးမှ ဘယ်သူက မက်ဆေ့စ်ပို့နေသလဲ မသိ။ ထပြီး ယူဖို့ မလုပ်ချင်တော့တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို လှိမ့်လိုက်ကာ စားပွဲပုလေးပေါ်က ဖုန်းကိုဆွဲယူလိုက်ပါတယ်။ လက်ထဲ ရောက်သည့်တိုင် ဖုန်း ကတုန်ခါနေဆဲဖြစ်တာကြောင့် ကိုအမြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။
From Ricky 1:32 AM - ဟေး ဆွီတီ...ကိုယ့်စိတ်တွေ အရမ်းကြွနေတယ်ကွာ...အရမ်းချစ်ချင်နေတယ်...မင်းဘာလုပ်နေလဲကွာ
ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတဲ့ Text message ကိုဘာလည်းသေချာအောင် ဒုတိယအကြိမ်ဖတ်နေတုန်းလက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ဖုန်းက လှုပ်ရမ်း လာပြန်တယ်။
From Ricky 1:33 AM – Shit! ဆောရီးဗျို့.....ကျုပ်ရည်းစား ကောင်မလေးဆီပို့မယ့်ဟာ..။
Sent to Ricky 1:33 AM - ဟား ဟား...ဒီကိစ္စအတွက် မစိုးရီမ်ပါနဲ့ လောရှည်ကြီးရာ
ဘယ်လောက်အံ့အားသင့်သွားမလဲမသိဘူး လောရှည်လို့ ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တဲ့ ကောင်လေး။ Ricky က ကျွန်တော်တို့ကျောင်း ဘောလုံးအသင်း ကပ္ပတိန်လေ သူက။ ဂျစ်တူးတူးမာဆတ်ဆတ်နဲ့ကောင်လေးအခုတော့ ချိုအီနေတာပဲ စကားလုံးတွေက။ ကျွန်တော့် ကျောင်းနာမည်ကို သူခေါ်တတ်ပေမယ့် နာမည်ရင်း မြန်မာနာမည်ကိုတော့ သူမခေါ်တတ်ခဲ့။ သူ့အရပ်က ၆ပေ ၃လက်မ၊ ကြွက်သားထု ချည်းနှင့်ပဲ ပေါင်၁၉၀လောက်ရှိတယ်။ ကျောင်းချိန်ပြီးတိုင်း အားကစားခန်းမကိုသွားပြီ ၀ိတ်မလေ့ရှိတာကို ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ဘူး တယ်။ လက်မောင်းကြီးတွေများ အယ်နေတာပဲ။ ခေါင်းအုံးပြီး အိပ်လိုက်ရရင်ရှယ်ပဲဗျ။ ၀တ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုပါးပါးလေးမှာ သူ့ အထုပ်အထည်က ဖောင်းနေတာ။ သူဟာ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ အချုပ်ပဲ။ အိပ်ယာပေါ် ဗလာကိုယ်ထီးလှဲရင်း ပေါင်ကြားက ငပဲကို စောင်ပါးအောက်ရောက်နေတော့ အပေါ်ကလက်လျှိုနှိုက်နေမိပါတယ်။ Ricky ပုံရိပ်မျက်ဝန်းထဲ နေရာယူရင်းပေါ့။
စားပွဲခုံလေးပေါ်တင်ထားတဲ့ ဖုန်းက လှုပ်ရမ်းလာပြန်တယ်။
From Ricky 1:41 AM – Alex, ခဏနေက အကြောင်းကို တခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို မပြောဘူးမဟုတ်လား? မပြောဘူးနော်?
Sent to Ricky 1:42 AM – No! It's cool.
From Ricky 1:45 AM – kk ကျေးဇူးပဲ ဘော်ဒါ၊ ကျု့ပ်ကောင်မလေးဆီက စာပြန်မပို့ဘူးဗျာ
Sent to Ricky 1:46 AM - မနက် ၂နာရီထိုးခါနီးပြီလေ Ricky ၊ အိပ်တော့။
From Ricky 1:46 AM - ကျုပ် ဟိုစိတ်အရမ်းထန်နေတာဗျ၊ အိပ်လို့မရဘူး။
Sent to Ricky 1:47 AM - အာ!...အဲဒါ ဘာလို့ငါ့ကိုလာပြောနေရတာလဲ?
From Ricky 1:49 AM - မသိဘူးဗျာ၊ လူလည်းနုံးချိပြီး ဘာတွေပြောနေမိမှန်းမသိဘူး
Sent to Ricky 1:51 AM - မင်းဒီလို ညစ်တီးညစ်ပတ်စာတွေ မင်းကောင်မလေးဆီ တော်တော်ရိုက်ပြီး ပို့တယ်လား?
From Ricky 1:53 AM - အဲဒီစော်က ဘယ်တော့မှ စိတ်မ၀င်စားပါဘူး :(
Sent to Ricky 1:54 AM - အဲဒါဆိုးတာပဲ။ ဒါဆို ငါအခုစိတ်ပါတယ်ကွာ!
From Ricky 2:00 AM - တကယ်? မင်းစိတ်ပါနေပြီပေါ့?
Sent to Ricky 2:01 AM – Yeaaa.....ငါအခု...-ီးကိုကိုင်ပြီး ကစားနေပြီ
From Ricky 2:01 AM - ငါလည်းအတူတူပဲ။
Sent to Ricky 2:02 AM - :)
ဒီလိုအကြောင်းတွေ စကားစမြည်လုပ်ဖြစ်ကြတာ ကျွန်တော်ယုံတောင် မယုံနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော် အတော့်ကို ခြေကုန်လက်ပန်းကျနေပြီ မျက်လုံးတွေလေးလံပိတ်ကျပြီး အခုပဲအိပ်ပျော်သွားတော့မှာ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဖုန်းမက်ဆေ့စ်စာတွေ လက်ခံရရှိနေတာကို ရွှင်မြူးနေသေးတာ။ Ricky ရဲ့ Flow တွေနှင့် ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဝေးဝေးမျောနိုင်မလည်း ကြည့်ချင်သေးတာလည်းပါမှာပါ။ ပေါင် ကြားက မမာ့တမာဖြစ်နေတဲ့ငပဲကို ကစားဖြစ်တာ အခုတော့ ၉၀ဒီဂရီတောင်ကျော်အောင် မတ်ပြီးမာနေပါပြီ။ ဒီကိစ္စကိုလည်း အဆုံးသတ် ခံစားချင်သေးတာ 'ရှီး' ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ကလေးကို လက်နဲ့အသာပွတ်သပ်ကြည့်တော့ အရည်ကြည်များတောင်စို့နေပြီပေါ့။ ကဲ... ဆက်ပြီးဘာတွေပြောဖြစ်ကြလည်း ကြည့်ကြရအောင်။
Ricky: ခင်ဗျား ပြီးခါနီးပြီလား ဒါမှမဟုတ် ဘာဖြစ်နေလဲ?
me: မပြီးသေးပါဘူး အခုမှစတုန်း၊ မင်းကော?
Ricky: ကျုပ်လည်း အခုမှစလုပ်တာလေ။ ကောင်မလေးဘက်ကပြန်တုန့်ပြန်ရင်ကောင်းမယ်
me: messages တွေထဲမှာ သူ့ကိုမင်းဘယ်လိုမျိုးတွေ ပြောသေးလဲ?
Ricky : အာ...ငါ့ရှေ့မှာ မင်းဒူးထောက်ပြီး -ီးကိုစုပ်ပေးစေချင်တယ်ကွာ...
me: အမ်း...အဲအသံက ကောင်းသား
Ricky: ကျုပ်သိပါတယ်။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်?
me: မင်း တကယ်မာတောင်နေပြီလားကွ ?
Ricky: အင်း...တကယ့်ကို မာတောင်နေပြီ။ ခင်ဗျားကော?
Ricky: ခင်ဗျား -ီး ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲ?
me: ဘာလဲ? ဘာကြောင့် ငါ့-ီးအကြောင်း မင်းကသိချင်ရတာလဲကွာ?
me: ကောင်းတယ်၊ ငါလည်း အတူတူပဲကွ
Ricky: ဒါဆို ဘယ်လိုပုံသဏ္ဌာန်လဲ?
me: မာတောင်ပြီး တင်းနေတဲ့ -ီးကိုအရင်းက ဆုပ်ကိုင်ထားတာ လေထဲကိုတန်းနေရော
Ricky: ထပ်ပြီး ပြောပါဦး :D
me: ငါ့ဟာက ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားတယ်၊ ဒီည ကြည့်ရတာ -ီးထိပ်ကပိုပြီး ကြီးနေသလိုပဲ၊ သောက်ရမ်းမာနေတာ အကြောတွေထောင် နေတာကိုတောင်မြင်ရတယ် သိသိသာသာပေါ့။
Ricky: အမ် ဟမ်...
me: ငါ့ရွှေဥတွေကို တစ်ခြားလက်တစ်ဖက်ကကိုင်ထားတယ်၊ -ွင်းထုနေတာနှင့် တစ်ပြိုင်တည်းလိုလို ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်နေတာကွ။
Ricky: အာ...အဲဒီဖီးလ်က သောက်ရမ်းgoodတာ
me: မာတောင်နေတဲ့ -ီးကြီးကို ဖွဖွကိုင်ပြီး ပွတ်လိုက်ဖျစ်ညှစ်ပြီးထုလိုက် လုပ်နေတာလည်း ငါကြိုက်တယ်။
Ricky : အဲဒါကို ကျုပ်လည်းအခုလုပ်နေပြီ၊ ငပဲကြီးက မာပြီးတုန်နေတာပဲ။
Ricky: ခင်ဗျား -ီးအကြောင်း ထပ်ပြောဦးဗျာ
me: ငပဲကြီးက ငါ့လက်သီးဆုပ်ထဲ လျောကနဲ လျောကနဲ ၀င်ထွက်နေတာက။ ချောဆီ ဆွတ်ထားတော့ ပြောင်ချောနေတာပဲ
Ricky: ထိပ်က အရည်ကြည်တွေရွှဲနေပြီလား ?
me: Yeah! နွေးနွေးလေးစီးကျနေပြီ။ ထိပ်ကနေ ယိုစီးနေတာ အတံတလျောက်ကို
Ricky: ခင်ဗျား ဘယ်လိုထုတာလဲ?
me: ခေါင်းပိုင်းလေးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ခပ်မြန်မြန်ထုတယ်၊ ပြီးတော့အရှိန်လျော့လိုက် တစ်ချောင်းလုံးကိုပွတ်သပ်လိုက် အလှည့်ကျပေါ့ကွာ
Ricky: ခင်ဗျား ကျုပ်ဟာကိုကြည့်ချင်လား?
me: မင်းဟာကို ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?
နှစ်မိနစ်လောက် ငြိမ်သက်သွားပါတယ် ဘာမှမဖြစ်ဘဲ။ အိပ်ယာထဲလှဲချလိုက်ပြီး ကိုယ့်ငပဲကိုယ်ကိုင် ကစားရင်း ရဲ့တုန့်ပြန်မှုကို စောင့် နေခဲ့ပါတယ်။ ခဏနေတော့ လက်ထဲဆုပ်ကိုင်ထားဆဲ ဖုန်းကလှုပ်လာတာကြောင့် ဖုန်းမက်ဆေ့စ်ကို ဖွင့်လိုက်တာပေါ့။ အဲဒါ စာသားတွေ မဟုတ်ဘူးဗျ။ အဲဒါ ဓာတ်ပုံတစ်ခု။ လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ က သူ့ငပဲကိုကိုင်ပြီး နေလေရဲ့။ သူအိပ်ယာပေါ်လှဲနေရင်း ရိုက်ထားတာဆိုတော့ ဓာတ်ပုံထဲမှာသူ့ဗိုက်သားပြင်ကိုလည်းမြင်ရပါလေ့။ ပုံအနေအထားက မကောင်းပေမဲ့ ပုံရိပ်တွေက တော်တော် ပြတ်သားတယ်။ သူ့ဆီးစပ်ကအမွှေးနုလေးတွေက ဗိုက်သားပြင်တလျှောက်ကနေ ရင်အုပ်ဆီကိုတန်းနေတာ။ ရင်အုပ်ကြီးကလည်း ဖောင်းကားလိုက်တာ အားရစရာကြီး။ သူ့အိပ်ခန်းထဲက ညအိပ်မီးအရောင်နဲ့ ရိုက်ထားတာပဲ။ အောက်ပိုင်းကို အကြည့်ရွေ့မိတော့ ဗိုက် သားကိုကပ်နေသော ကြီးထွားလှသည့် ငပဲတစ်ချောင်းကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ကြည့်ရတာ ၇လက်မကျော်လောက် ရှည်မယ်။ မာတောင် နေတာလဲကျောက်သားဆိုင်တစ်ခုအလားပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ထက်ပိုတုတ်သေးတယ်။ သူ့လက်ချောင်းတွေက ငပဲတစ်ချောင်းကို မတ်နေအောင်ထိန်းကိုင်ထားတာဆိုတော့ ငပဲတော်တော်ကြီးမှန်း မြင်သိနိုင်သား။ ကွမ်းသီးခေါင်းကလည်း သံခမောက်လိုပဲ လှတယ်။ ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားပြီး ပန်းသွေးရောင်ကိုထလို့။ ရေချိုးခန်းမီးရောင်နှင့် တစ်ချက် တစ်ချက်လင်းသွားတဲ့ အလင်းရောင်ကြောင့်ထင့် ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်မှာ အရည်ကြည်နည်းနည်းစို့နေတာကိုလည်းမြင်ရတယ်။ သူ့လိင်တံ အရင်းကအရာတွေကိုလည်း မြင်ရတာပေါ့။
အမွှေးခွေခွေလေးတွေပုံနေတဲ့ ခြုံပုတ်ငယ်လေးတစ်ခု ဆီးစပ်မှာ။ နုညံ့ပုံတော့ရသား။ အတံကို သူက ဆွဲကိုင်ထားတာဆိုတော့ ရွှေဥတွေ ကိုလည်း လုံးဝန်းကြီးမားစွာမြင်နိုင်ပါရဲ့။ မိုက်တယ်ဗျာ...ညင်ညင်သာသာ ကိုင်ပြီးပွတ်သပ်လို့ရရင် ကောင်းမယ်ပိုပြီးတော့။ ပစ္စည်း ကောင်းလေးကို အလုံးစုံမြင်ရတော့ ကျွန်တော့်ခံတွင်းက သွားရည်တွေစိမ့်ထွက်လာသလိုပါပဲ။ သူ့ငပဲကို ကြည့်နေရာက အောက်ပိုင်း ကိုရွှေ့လိုက်တော့ သူ့ခြေချင်းဝတ်မှာ အောက်ခံဘောင်းဘီဖြူက ချိတ်လျက်။
me: Wow! အားလုံးလှတယ်ကွာ good!
Ricky: ခင်ဗျားအဲလိုထင်တယ်ပေါ့၊ ကျေးဇူးပဲ၊ အဲဒီပစ္စည်းကြီးမားသောက်ရမ်းမာနေပြီဗျ။
me: ငါလည်း အတူတူပဲ...ခဏလေးစောင့်။
ကျွန်တော် မက်ဆေ့စ်ကို ပိတ်လိုက်ကာ ဖုန်းကင်မရာကို ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲပုံကို သေချာရိုက်ပြီးသူ့ဆီပို့ပေးလိုက်တယ်။ ပုံကိုမရိုက်ခင်ပိုပြီး မာအောင်ခပ်သွက်သွက်လေး လက်ကစားလိုက်ကာ ပိုမိုမာတောင်စေတာကြောင့် အနေအထားက အိုကေမှာ အမှန် ပါပဲ။ခုတင်ပေါ်က မွေ့ယာပေါ်မှာ အသာလေးနောက်မှီလှဲလိုက်ကာ ဖုန်းကို ဒူးတွေဘက်မှာထားလိုက်တာကြောင့် ကျွန်တော့်-ီးနှင့် မျက်နှာကို ကောင်းကောင်းမြင်ရမယ့်အနေအထားပေါ့။ မျက်လုံးကလည်း ရီဝေေ၀အကြည့်တွေ လွှတ်လိုက်သေးတယ်။ ပြီးမှ ခလုပ်ကိုနှိပ် ချလိုက်တာ။ အားလုံးပြီးတော့ ပို့လိုက်တယ်သူ့ဆီ။
Ricky: Fuck man. HOTTTT..
Ricky: ကျုပ် ခင်ဗျားပစ္စည်းကိုစုပ်မယ်
me: အမ်း...မင်းလျှာပူပူနွေးနွေးကြီး ငါ့ငပဲခေါင်းကို ကလိနေပြီလို့ ခံစားရတယ်
Ricky: ခင်ဗျား ပစ္စည်းတစ်ခုလုံး ကျုပ်ပါးစပ်ထဲဝင်သွားပြီလို့တွေးကြည့်မြင်ယောင်ပြီး။
me: မင်းဘယ်လိုပြုစုမယ်ဆိုတာ ပြောကြည့်လေ
Ricky: ကျုပ် ခင်ဗျား -ီးရဲ့ထိပ်ကိုလျှာလေးနှင့်စလျက်မယ်၊ ပြီးတော့ ထိပ်ပိုင်းလေးကို ငုံပြီးစုပ်မယ်၊ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေနှင့် ပွတ်ဆွဲ လိုက်ပြီးတော့ တစ်ချောင်းလုံးကို ပါးစပ်ထဲသွင်းမယ်ဗျာ
me: မိုက်တယ်....ဆက်လုပ်....အ...ငါ...အရည်ကြည်တွေ အများကြီးထွက်လာပြီ...အခု...အ
Ricky: ခင်ဗျား ငပဲ ပါးစပ်ထဲထည့်ထားတုန်းမှာလည်း လျှာနဲ့ကစားမယ်ဗျာ။ တဖြည်းဖြည်း အာခေါင်ထဲထိဖိသွင်းပြီး လည်မျိုထဲထိသွင်း နိုင်သမျှ သွင်းမယ်။
me: အာ...ငါ့ကောင် သောက်ရမ်းမိုက်တယ်။
Ricky: ကျုပ်ဆံပင်တွေကို ဆွဲကိုင်ပြီး ပါးစပ်ကို စိတ်ကြိုက် -ိုးဗျာ
Ricky: ကျုပ်လျှာတွေ အာတွေသုံးပြီးပြုစုနေတာ ခင်ဗျားငပဲကိုလေ...ပူနွေးနေတာပဲ ခင်ဗျားဟာက...အ..
me: တံတွေးနည်းနည်း ငါ့လက်ထဲထွေးထည့်ပြီး ချောဆီဆွတ်သလိုလုပ်ရင်း -ုနေတာအခု
Ricky: ခင်ဗျား မျက်လုံးကိုပိတ်ပြီး စိတ်ကူးထဲဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့် ငပဲတစ်ချောင်းလုံး ကျုပ်ပါးစပ်ထဲရောက်နေတာကို
me: မင်း အခု ငါ့ကို-ိုးနိုင်မလား?
Ricky: ကျုပ်ဘဲအချင်းချင်း တစ်ခါမှ မချဖူးဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ?
me: ငါ အိပ်ယာပေါ်မှာ ပက်လက်အိပ်ပြီး မင်းကိုမျက်နှာမူနေမယ်ကွာ၊ မင်းက ငါ့ခြေထောက်တွေကြားမှာ ဒူးထောက်ပြီး နေရာယူ ထားတယ်၊
Ricky: ကျုပ် အဲဒီအနေအထားကို ကြိုက်တယ်ဗျ....
me: ငါ့ခါးကို မင်းကဆွဲယူပြီး ခြေထောက်တွေကို အပေါ်မြှောက်လိုက်တာ ငါ့တင်ပါးတွေက ကြွတက်လာတာပေါ့၊ မင်းက ငါ့အပေါ်ကို မှောက်ချလိုက်တယ်။
Ricky: mmmm.....ကျုပ် -ီးသောက်ရမ်းမာနေပြီ Fuckkkk..
me: မင်းရဲ့မာတောင်နေတဲ့ ငပဲကြီး ငါ့တင်ပါးအကွဲကြောင်းထဲ တိုးဝင်လာတယ်၊ ကွမ်းသီးခေါင်းကို အပေါက်ဝထဲ ဖိဖိကစားတာ နောက် တော့။
me: ပြီးတော့ မင်းကဖြေးဖြေးလေးစပြီး ဖိသွင်းတယ်၊ မရပ်ဘဲဆက်တိုက်ဖိတာ ဟိုးအတွင်းထဲနက်သထက် နက်သထက် အာ......တစ် ချောင်းလုံးဝင်သွားတာပဲ။
Ricky: အဲဒါက ကြပ်နေလား?
me: တကယ့်ကိုကြပ်နေတာ၊ ပြီးတော့ နွေးနေရော၊ မင်းငပဲကို အတွင်းထဲဖိသွင်းထားတုန်း ငါ့ခရေကြွက်သားတွေနှင့် ညှစ်ညှစ်ပေးတာ ပေါ့၊ မင်းကလည်း ငါ့တင်ပါးတွေကို လက်နှင့်ကိုင်ထားတာက ကျစ်ကျစ်ကိုပါလို့ ။
Ricky: အင်း! Fuck ....အဲဒါမိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဆက်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲ? အပြင်ဆွဲထုတ်လိုက်ဦးမယ်။ Good တယ်ဗျ။
me: အား...အ....ငါအခုလက်ချောင်းတွေနှင့် ခရေ၀ထဲအထုတ်အသွင်းလုပ်နေတယ်
me: ဟုတ်တယ်၊ အရမ်းကောင်းတယ်၊ လက်ခလယ်ကို ရွှေဥတွေရဲ့အောက်က အပေါက်လေးထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်တာ....ရှီး။
Ricky: ကျုပ် ကြိုးစားကြည့်မယ် အဲဒါကို....အား...ကျုပ်ထည့်လို့မရဘူး အရမ်းကြပ်နေတာ။
me: လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကို အရင်သွင်းကြည့်။ ဖိဖိပြီးသွင်း..မရပ်လိုက်နဲ့နော်။
Ricky: AHH! ကောင်းတယ်၊ ကျုပ်စိတ်ထဲ ပြီးတောင်ပြီးချင်လာပြီ feelings က။
me: ငါလည်းအတူတူပဲ။ မင်းဖာသာမင်း လက်ချောင်းအထုတ်အသွင်းလုပ်ပြီး ကစားရင်း လက်တစ်ဖက်က ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်ပြီး ထုပေါ့။ Ricky: ကျုပ်တစ်ကိုယ်လုံးလည်း လှုပ်ခါလာပြီ အိပ်ယာပေါ်မှာ shit shit shit
me: ဒီဘက်မှာ ငါတော့ပေါက်ကွဲထွက်တော့မယ်ကွ
Ricky: အတူတူ တစ်ချိန်တည်းပြီးမယ်လေ...။
ကျွန်တော်ဖုန်းကို ဘေးမှာအသာထားလိုက်ရင်း လက်ချောင်းကလေးကို အတွင်းထဲပိုမိုရောက်အောင်အသွင်းအထုတ်လုပ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အသက်ရှူသံတွေ မြန်ဆန်လာသလို ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံတွေဟာလည်း ကဆုန်ဆိုင်းခုန်ပေါက်လာကြပါပြီ။ ကျွန်တော့် ကိုယ် ခန္ဓာဟာ ပူနွေးလာပြီး အခန်းတွင်းအပူချိန်တွေတောင် မြင့်တက်လာသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေကို ခရေ၀ကဖယ် ရှားလိုက် ရင်း ဖုန်းကိုဆွဲယူလိုက်ပါတယ်။ တခြားလက်တစ်ဖက်ကတော့ ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်ရင်း အလုပ်ရှုပ်နေဆဲပေါ့လေ။ Ricky က ဖုန်းခေါ် တာ ကိုး။ သူစကားစဆိုကတည်းက ခပ်တိုးတိုးလှိုက်မောနေပုံနှင့်။ ကြားရတဲ့အသံက အသက်ရှူသံခပ်ပြင်းပြင်းနှင့် လှုပ်ရှားနေသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား 'ဟယ်လို' ကလွဲလို့ တခြားစကားမဆို။ နှစ်ဦးသား အသာငြိမ်သက်လှဲလျောင်းရင်း တစ်ယောက်လှုပ်ရှား နေသံကို တခြားတစ်ယောက်က နားစွင့်နေမိကြပါတယ် ညည်းညူသံတွေ တက်ကြွသံတွေရောပေါ့။ သူ့နှလုံးခုန်သံ ကျယ်ကျယ်ကြားနေ ရသလား ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံလားမသိကြားနေရပါသေးတယ်။ Ricky ရဲ့မြင့်မားတဲ့ ညည်းညူသံတိုင်းဟာ ကျွန်တော့်ငပဲကို မတ်မတ်သွားစေပါရဲ့။ ထိတွေ့အာရုံခံစားမှုတွေက ပိုမိုပြည့်စုံရသလိုထင်ရပါတယ်။
အိပ်ယာပေါ်မှာ အသာလှဲနေရင်း လက်တစ်ဖက်က ဖုန်းကိုနားမှာကပ်လျက် Ricky အသံနားထဲသွင်းသလို အခြားလက်တစ်ဖက်ကိုတော့ ကျွန်တော့်ငပဲကြီးကိုဆုပ်ကိုင်ကာ ခပ်သွက်သွက် အလုပ်ရှုပ်စေတာပေါ့နော်။ငပဲတစ်ချောင်းလုံးရဲ့ ထိပ်ပိုင်းကနေအောက်ခြေ၊ အောက်ခြေ ကနေ ထိပ်ပိုင်းအပြန်ပြန်အလှန်လှန် ရွေ့လျားနေတဲ့ လက်တစ်ခုရဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေခြင်းပါပဲ။ မိနစ်အတော်ကြာ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုတွေနှင့် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။
ခဏနေတော့ Ricky ရဲ့အသံချိုအီအီဟာ ဖုန်းမှတစ်ဆင့် နားထဲရောက်လာပါတယ်။ 'ကျုပ်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ' တဲ့လေ။ ကျွန်တော်ကြား ရတာ ဘယ်လောက်ဝမ်းသာသွားရသလဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းပေါက်ကွဲထွက်တော့မှာမို့လေ ကျွန်တော့် အတွက်က။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကို ကိုယ့်ဘာသာပွတ်သပ်နေဆဲမှာပဲ Ricky ရဲ့အော်ညည်းသံကိုကြားလိုက်ရတာ ဘယ်လောက်စိတ် လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်မှတ်လဲ။ အဲဒီအသံက အကျယ်ဆုံး.....စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအမြှင့်တင်ပေးနိုင်ဆုံးသောအသံပါပဲ။ ကျွန်တော်မထိန်း နိုင်စွာ ပန်းထုတ်မိချိန်မှာတော့ သူ့အသံဟာ တိုးညှင်းသွားပြီး အသက်ရှူသံခပ်တိုးတိုးသာကြားရတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲထိပ်ကနေ လေထုထဲကိုပန်းထုတ်လိုက်တာ အချို့က ဆီးစပ်ပေါ်....ရင်အုပ်ပေါ်တော့ပိုများတယ်....ပေါင်ပေါ်တစ်စက်နှစ်စက်....လည်ပင်းနှင့် မျက်ခုံး တွေပေါ်အချိုက။ ဆံပင်ပေါ်မှာလည်း အချို့သောအရည်ပျစ်တွေ ဆွဲငြိလျက်။ ကျွန်တော် အမြင့်ဆုံးခံစားချက်တွေ ဖြစ်တည်နေတဲ့အချိန် ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေတဆတ်ဆတ်ခါနေသလို လက်ထဲကဖုန်းလည်း အိပ်ယာပေါ်လျောကျသွားပါပြီ။ ကျွန်တော် တကယ့်ကိုသက် သောင့်သက်သာ၊ နောက်ပြီး နွမ်းလျစွာ အိပ်မောကျသွားရတာပေါ့နော်။ လုပ်ဖူးခဲ့သမျှ တစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေမှုတွေထဲမှာ ကျေနပ်နှိမ့် သိမ့်မှုအရှိဆုံးပါပဲ။
Fuck....ကျောင်းပိတ်ရက် အိပ်ကောင်းခြင်းမအိပ်ရ ဘယ်မကောင်းဆိုးဝါးက စောစောစီးစီး text message ပို့နေလဲမသိဘူး။ အိပ်တစ် ၀က်နိုးတစ် ၀က်နှင့် ခေါင်းအုံးအောက်လျှိုထားတဲ့လက်တစ်ဖက်ကို ထုတ်ပြီး ဟိုသည်လှုပ်ရှားကာ တုန်ခါနေတဲ့ပစ္စည်းရှိရာကို စမ်းသပ် လိုက်ပါတယ်။
From Ricky 8:58 AM – Alex, ခင်ဗျား နိုးပြီလား?
Sent to Ricky 8:59 AM - မင်းငါ့ကိုနှိုးလိုက်တာလေ
From Ricky 9:04 AM - ဆောရီးဗျာ...ကျုပ်ကိုတစ်နာရီအတွင်းလောက်လာတွေ့လို့ရမလား?
Sent to Ricky 9:06 AM - အာ...စနေနေ့လေကွာ...ငါအိပ်ချင်သေးတယ်..။
From Ricky 9:07 AM - ကျုပ်တို့ မနေ့ညကပြောဆိုထားတဲ့ကိစ္စစကားဆိုရအောင်လို့ပါ
ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာကို ငုံ့ကြည့်မိတော့ အ၀တ်မရှိ၊ အိပ်ယာပေါ်လှဲလျက်။ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ယုံတောင်မယုံနိုင် ခဲ့ဘူး။ အိပ်မက်တစ်ခုလို့ပဲတင်ခဲ့တာဗျ။
Sent to Ricky 9:07 AM - ငါတို့ဘယ်နေရာမှာတွေ့ကြမလဲ?
Alex Aung (4 Aug 2011)
Posted by Alex Aung at 1:02 PM No comments: